"Vimba" dialog pane chishandiso cheIOS pane macOS | Ndinobva mac
"Vimba" dialog pane chishandiso cheIOS mune macOS
Nhasi chimwe chinhu chakaitika kwandiri chisina kumboitika kwandiri uye ichocho ndechekuti ini ndakabatanidza yangu iPad kuMac kuti ndikwanise kuendesa mifananidzo nemagwaro uye mushure mekutsikirira nenzira isiri iyo mubhokisi rebhokisi pa iPad iyo yandaifanirwa kubaya "kuvimba", ndakabaya pakatarisana.
Parizvino pakanga pasina dambudziko, ndakafunga kuti, nekuti aka hakasi kekutanga kuti izvi zviitike kwandiri, mushure meizvozvo zvandakaita ndizvo zvandakanga ndagara ndichiita, ndiko kuti, buritsa tambo yemheni zvakare woibatanidza zvakare mudziyo.
Chii chakandishamisa pandakabaya iyo iPad mukati, iyo skrini haina kundiratidza iro dialog box kwandinofanira kubaya pa "trust" uye nekudaro mudziyo wacho hauna kuzivikanwa neTunes kukwanisa kuita kufambisa faira kwandaida.
Chokwadi ndechekuti pakutanga ndakafunga kuti chimwe chinhu chakange chakaipa netambo yemheni, saka ndakaedza imwe yandaiva nayo kumba asi hapana, haina kushanda. Ndakaongorora chiteshi chemheni cheiyo iPad kuti ndione kana yaive yaunganidza marara pazasi, ndakatarisa USB-C chiteshi cheMacBook yangu uye zvese zvaive zvechokwadi. Ini ndaifanira chete kutsvaga ruzivo uye mushure mekubaya mishoma mbeva painternet ndakagadzirisa dambudziko.
Pane dzimwe nguva apo iTunes inodzika neichi chiito, kwete iko kuzvishandira pachayo, asi maitiro emukati anoita kuti isabvumidze iyo iOS chishandiso kutipa iyo dialog bhokisi randataura. Senge panguva yandakamuudza "Usatende", iTunes inofunga kuti haifanire kuvimba neiyo iPad uye haina kuiona uye mhinduro ndeyekuti iyo iPad ione kuti inofanira kuvimba neMac zvakare.
Kune izvi, zvakakosha kuti utangezve mabhokisi ekuzivisa ari muTunes pachawo, atinofanira kupinda iTunes> Zvaunofarira> Yepamberi tebhu> Gadzirisazve Yambiro. Kungoita izvi, iyo iPad yakatanga iro dialog bhokisi zvakare uye ini ndakakwanisa kubaya pa "Vimbai", mushure maizvozvo yakabva yabuda mubhawa reTunes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » "Vimba" dialog pane chishandiso cheIOS mune macOS
Zvakabatana zvikumbiro zveMacOS uye iOS zvingave zviri patafura kuApple